Semalt E-Commons SEO: कसरी तपाइँको अनलाइन शपमा रूपान्तरण अनुकूलन गर्ने?
अनलाइन स्टोर सुरू गर्नु भनेको अनलाइन बेच्नको लागि सडकको शुरुआत मात्र हो। लक्ष्य प्राप्त गर्न अनलाइन स्टोरमा रूपान्तरण निर्धारित गर्ने धेरै तत्वहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक पर्दछ। तपाईंको वेबसाइटमा धेरै आगन्तुकहरूलाई ड्राइभ गर्न यो के लायक हो?
तपाईको वेब स्टोरमा आगन्तुकहरू पाउन सैद्धान्तिक रूपमा गाह्रो छैन। यो उद्देश्यका लागि उपयुक्त रकम विनियोजन गर्ने कुरा हो, जसले तपाईंलाई प्रयोगकर्ताहरूलाई द्रुत रूपमा प्राप्त गर्न अनुमति दिनेछ, उदाहरण: गुगल विज्ञापन वा फेसबुक विज्ञापनलाई धन्यवाद, वा लामो अवधिको लागि, उदाहरणका लागि। SEO मा लगानी गरेर। यो हाम्रो लागि बजेट प्रयोग गर्न गाह्रो छैन, तर स्टोर लाभदायक मानिन्छ, त्यसैले बेच्ने वेबसाइट बनाउने लक्ष्य हुनुपर्दछ।
'' तपाइँले कुनै पनि उत्पादनहरू अर्डर गर्नको लागि तपाइँको वेबसाइटको भ्रमण गर्ने सबैलाई गर्नुहुने छैन, तर तपाइँ तपाइँको रूपान्तरण दर अधिकतम पार्ने लक्ष्य राख्नु पर्छ।
वास्तवमा रूपान्तरण भनेको के हो?
यो प्रयोगकर्ता द्वारा एक विशिष्ट कार्य को प्रदर्शन हो - उदाहरण को लागी। एक कम्पनीको शोकेस हो कि एक वेबसाइट मा, रूपान्तरण एक प्रस्ताव को लागी एक अनुरोध संग एक जांच पठाउँदै हुन सक्छ। एक अनलाइन स्टोर को मामला मा, रूपान्तरण बिक्री हो। गतिविधिले गरिएको गतिविधिहरू अपेक्षित परिणामहरू ल्याउँछ कि भनेर ट्र्याक गर्न, तपाईंले रूपान्तरण दरको विश्लेषण गर्नुपर्छ, जुन तपाईंलाई तपाईंको अनलाइन स्टोरमा भ्रमण गर्ने प्रयोगकर्ताहरूले कुन प्रतिशतले खरीद गर्‍यो भनेर बताउँछ।
उदाहरण: तपाईंको वेबसाइट ० दिन भित्र १०,००० व्यक्तिले भ्रमण गरेका थिए। प्रयोगकर्ताहरू र उनीहरूमध्ये २०० जनाले उत्पादहरूलाई अर्डर गरे। यस अवस्थामा, रूपान्तरण दर २% छ। तर के यो धेरै छ? सानो? यो भर पर्छ।
रूपान्तरण दर र उद्योग
तपाई दुबै सामानको रूपान्तरण गणना गर्न सक्नुहुन्छ ट्राफिकको स्रोतको आधारमा र रूपान्तरण। यहाँ केहि पोइन्टहरू छन् जसमा तपाईंको औसत रूपान्तरण दर आधारित छ:
पृष्ठहरू उत्पादन र पार्टनर वेबसाइटहरूको सिफारिश गर्दै: .4..44% यो उच्च रूपान्तरण दर हो, र यस अवस्थामा हामी फोरम वा ब्लगका अन्यहरू बीच अवतरण पृष्ठमा पुनर्निर्देशनको कुरा गरिरहेका छौं।
ईमेल मार्केटिंग: .3..3२ प्रतिशत
ब्राउजरमा वेबसाइट ठेगाना प्रविष्ट गरेपछि प्रत्यक्ष इनपुटहरू (रेफरल): २.१ percent प्रतिशत
खोज इन्जिनबाट जैविक ट्राफिक: ०.०8 प्रतिशत
यी समग्र रूपान्तरण दरहरू हुन्, र त्यहाँ एक उद्योग मुद्दा पनि छ। यो होइन कि तपाइँ जे बेच्दै हुनुहुन्छ, त्यहि रूपान्तरण दर प्राप्त गर्न वास्तविक छ। व्यक्तिगत उद्योगहरूलाई ध्यानमा राख्दै, यस्तो देखिन्छ:
खाना र पेय: 8.88%
स्वास्थ्य र सौन्दर्य: 8.०8%
खेल र खेलौना: २.4343%
गहना र सामान: २.१14%
घर र बगैचा: १.8१%
कपडा र फेसन: १.8585%
खेल र मनोरन्जन: १.9%%
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, रूपान्तरण दर उल्लेखनीय भिन्न छ। फर्निचरका लागि खाना र पेय पदार्थ बेच्ने पसलहरूको तुलनामा औसत चार गुणा कम छ। यो धेरै ठूलो भिन्नता हो।
वास्तवमा, ई-वाणिज्यमा, तपाईले निरन्तर विश्लेषण गर्नुपर्दछ र परिणामहरू सुधार गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ, किनभने बजार निरन्तर परिवर्तन हुँदैछ, र ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू पनि। जे होस् तपाईंले निष्पक्ष रूपान्तरण दर प्राप्त गर्नुभयो, यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले आफ्नो दौडमा आराम गर्नुपर्दछ। तपाइँ अझै पनी तपाइँको स्टोर र तपाइँको प्रतिस्पर्धी वेबसाइटहरु को विश्लेषण गर्नु पर्छ। केवल यस तरीकाले तपाईले आफ्नो व्यवसाय बढाउनुहुनेछ र तपाईको नतिजाहरुमा सुधार ल्याउनुहुनेछ। तपाइँको रूपान्तरण दर बढाउन के गर्ने? वास्तवमा, प्रत्येक स्टोरको लागि बिभिन्न चरणहरू आवश्यक पर्दछ।
अनलाइन स्टोरमा रूपान्तरण अनुकूलन
तपाईको रूपान्तरण दर सुधार्नको लागि तपाईंले लिनु पर्ने चरणहरू पृष्ठ कस्तो देखिन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ, के त्रुटिहरू सुधार गर्न आवश्यक छ। यो सम्भव छ कि तपाईंले मेरो स्टोरहरूमा धेरै प्रस्तावहरू पहिले नै लागू गरिसक्नु भएको छ, तर हुनसक्छ तपाईंले यसको कम्तिमा केही प्रयोग गर्नुहुनेछ।
दक्ष आन्तरिक खोज ईन्जिनहरू
धेरै चोटि यो हुन्छ कि जब म दिईएको स्टोरमा केहि खोज्दैछु, म â ¦ गुगल खोजी प्रयोग गर्दछु। किन? यस तथ्यको कारण कि अक्सर भण्डारहरूको खोजी ईन्जिनहरू अप्टिमाइजेसन हुँदैन र म खोज्दै गरेको उत्पादनहरू नदेखाउनुहोस् जुन रोबोटहरूको संसाधनमा एक छ। Typos पनि एक समस्या हो। यदि तपाइँ स्टोरहरूको खोजी ईन्जिनहरूमा गल्ती गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले प्राय: आफूले खोजिरहनु भएको उत्पादन देख्नुहुने छैन, तर Google ले यो पहिले नै देखाइसकेको छ, जबसम्म यो अवस्थित पृष्ठ Google मा अनुक्रमणिका हुन्छ। खोज इञ्जिनको सints्केत पनि मूल्यवान छ।
खराब काम गर्ने खोजी ईन्जिनले प्रयोगकर्तालाई तपाईंको स्टोरमा खरीद गर्नबाट रोक्न सक्दछ।
रूपान्तरण स्रोतहरूको विश्लेषण
मैले उल्लेख गरेझैं कुन मार्केटिंग गतिविधिहरू तपाईंले छनौट गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दै, यसको प्रभावहरू फरक हुन सक्छ। कम रूपान्तरण दर, जस्तै फेसबुक विज्ञापनबाट, यसको मतलब यो आवश्यक छैन कि यस्ता गतिविधिहरू प्रयोग गर्न लाभदायक छैन। ग्राहक प्राप्त गर्न लाग्ने लागतलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्छ। यो सम्भव छ कि यो सामाजिक नेटवर्क को मामला मा यो सबैभन्दा सानो छ। परिणामको विश्लेषण व्यक्तिगत गतिविधिहरूको लागि गरिनु पर्छ: SEO, गुगल विज्ञापन, वेबसाइट वा ई-मेल मार्केटिंगको तुलना। यदि दिईएको ट्राफिक स्रोतहरू प्रभावकारी छैनन् भने रूपान्तरण दर कम छ, र ग्राहकमा पुग्ने लागत बढी छ, यी गतिविधिहरूको लागि प्रयोग गरिएको कोषलाई विज्ञापनको रूपहरूमा स्थानान्तरण गर्नु राम्रो हुन्छ जुन तपाईंको स्टोरको लागि उत्तम परिणामहरू ल्याउँदछ।
सरल नेभिगेसन प्रस्तुत गर्दै
निश्चित गर्नुहोस् कि शीर्ष नेभिगेसन पट्टीमा सबै कोटीहरू र उप-कोटीहरू समावेश छन् जुन तपाईंको प्रयोगकर्तालाई रुचि छ। उसले रुची राख्ने कोटीमा पुग्न धेरै उप-पृष्ठहरूमा क्लिक गर्नुपर्दैन - यो गृह पृष्ठबाट उपलब्ध हुनुपर्दछ। अर्को कुरा - मेनू पहिलो दृष्टिमा ठिकै देखिन्छ, पृष्ठ खोल्ने बित्तिकै।
द्रुत पृष्ठ लोड हुँदै
ई-वाणिज्य को मामला मा, स्टोर को पृष्ठ शाब्दिक सेकेन्ड मा लोड गर्नु पर्छ। जब तपाईं अनलाइन स्टोरको वेबसाइटमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र उत्पादन आदेश दिन चाहनुहुन्छ, तर प्रत्येक पछिल्लो उपपृष्ठ लोड गर्न धेरै लामो समय लिन्छ; तिमी के गर्न जाँदैछौ? तपाईंले सायद अर्को साइट फेला पार्नुहुनेछ जहाँ त्यहाँ यस्तो समस्या हुँदैन, र त्यस्तै अन्य प्रयोगकर्ताहरू पनि गर्नेछन्।
तथ्यको रूपमा ", मोबाइल उपकरणमा पृष्ठ लोड गर्न एक सेकेन्ड ढिलाइले रूपान्तरण दर २०% सम्म घटाउन सक्छ! प्रयोगकर्ताहरूले साइट २ सेकेन्ड भन्दा बढि लोड हुने आशा गर्दछ। के यो यस्तो देखिन्छ? तपाईको स्टोर को लागी? पृष्ठ लोड समय कसरी कम गर्ने भनेर फेला पार्नुहोस्।
शिपिंग विकल्पहरूको विकल्प
प्रत्येक अनलाइन स्टोर मालिकले ग्राहकहरुलाई नि: शुल्क शिपिंग प्रस्ताव गर्न सक्दैन। यदि तपाइँ यो गर्न सक्नुहुन्न भने, सर्वप्रथम, यसलाई उचित मूल्यमा राख्नुहोस् र यसलाई एउटा विकल्प दिनुहोस्। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं एक उत्पादन किन्न चाहानुहुन्छ कि २० डलरको लागत र यसको शिपिंग लागत समान छ। के तपाई यो अर्डर गर्नुहुन्छ? बरु होइन, र त्यसो त ग्राहकहरु को सबै भन्दा। यो फरक हुनेछ यदि वितरण लागत to देखि dollars डलर बाट थियो।
एक परित्याग गरिएको उत्पादको मूल्य कम गर्दै
प्रयोगकर्ताले एउटा उत्पादन छनौट गर्‍यो, यसलाई कार्टमा थपियो, तर अन्तमा यसलाई छोडिदियो। त्यसो भए तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ? उसलाई सूचित गर्नुहोस् कि यस वर्गीकरण वस्तुको लागि मूल्य घटाइएको छ। यद्यपि यो सबै इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई त्यस्तो छुट दिने कुरा होईन, तर यो प्रस्ताव निजीकृत गर्ने बारेमा हो। अनलाइन स्टोरहरूमा तपाईले मूल्य वार्ता विकल्प पनि भेट्टाउन सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि जब तपाइँ वेबसाइट छोड्नुहुन्छ; तपाईंलाई सोधिनेछ कि तपाईं यस उत्पादनको लागि कति तिर्न इच्छुक हुनुहुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा, म प्राय: अर्डरमा धेरै दर्जनौं प्रतिशत बचत गर्न मद्दत गर्दछु।
भुक्तानी विकल्पहरूको विकल्प
वर्तमानमा, डेलिभरी खरीदहरूमा नगद त्यति पहिलाको रूपमा लोकप्रिय छैन, र यसले यसमा बढी मूल्य चुकाउने तथ्य पनि समावेश गर्दछ। उत्पादन वा सेवाहरूको लागि सबैको भुक्तानको बिभिन्न मनपर्दो प्रकार छ। केहि अनलाइन स्थानान्तरण रुचि, PayPal जस्तै। यो एक भन्दा बढी विकल्प दिन लायक छ अन्यथा तपाईं ग्राहकहरु लाई गुमाउन सक्नुहुन्छ।
छोटो तरिका एक उत्पादन किन्न
यो राम्रो छ कि कार्ट २ चरणमा छोटो पार्नुहोस् र पृष्ठको यस भागमा सबै तत्वहरू हटाउनुहोस् जुन ग्राहकलाई अर्डर राख्नबाट अलमल्याउन सक्छ। यद्यपि यो प्रदान गरिएको वस्तु वा सेवाको अर्डर गर्ने ग्राहकहरूलाई अन्य उत्पादनहरू प्रस्तुत गर्न लायक छ। यसले तपाइँलाई प्रति खरिदकर्ता औसत अर्डर मात्रा बढाउन अनुमति दिनेछ।
प्रयोगकर्ताको सुरक्षाको ख्याल राख्दै
यस्तो देखिन्छ कि स्टोर द्वारा सुरक्षित जडानको प्रयोग अब मानक छ, तर अझै त्यहाँ केहि साइटहरू छन् जुन यो प्रदान गर्दैन। तपाईं कसरी ती साइटहरू चिन्नुहुन्छ? वेबसाइट ठेगानाको छेउमा, उदाहरणका लागि। क्रोममा, तलको स्क्रीनशटमा देखाईएको जानकारी देखा पर्नेछ।
यस्तो सन्देशले किनमेललाई प्रोत्साहित गर्न सक्दैन। यसैबीच, SSL प्रमाणपत्र नि: शुल्क पनि उपलब्ध छ। यसले वास्तवमा के गर्छ? यसको लागि धन्यवाद, प्रयोगकर्ता र उपकरण बीच पठाइएको डाटा ईन्क्रिप्टेड छ र यो परिवर्तन वा अवरोध गर्न सकिदैन। स्टोरको वेबसाइटमा आवश्यक जानकारी समावेश गर्नुपर्दछ जुन प्रयोगकर्ताका लागि संकेत हो कि उसले सुरक्षित रूपमा किन्न सक्छ। नियमहरु वा सुरक्षा नीति को बारे मा। सम्पर्क विवरणहरू, ल्याण्डलाइन नम्बर सहित, अनिवार्य छन्। पहिलो खरीद भन्दा पहिले, ग्राहकहरु स्टोर को अस्तित्व प्रमाणित गर्न सक्छन्। यदि कसैले फोनलाई जवाफ दिएन भने उनीहरूले अर्डरहरू राख्न सक्दैनन्।
यदि तपाइँको वेबसाइट मा SSL प्रमाणपत्र छैन भने, कसरी यसले तपाइँको वेबसाइट लाई असर गर्छ?
कमजोर स्थिति - कम पृष्ठ दृश्यहरू
SSL (सुरक्षित सकेट लेयर) एक इन्टरनेट प्रोटोकल हो; यसको कार्य भनेको वेबसाइटमा डेटा सुरक्षित गर्नु सम्पूर्ण जडान ईन्क्रिप्ट गरेर। जब प्रयोगकर्ताहरू एक वेबसाइट भ्रमण गर्छन्, ब्राउजर र वेबसाइटको सर्भर बीच एक जडान स्थापित हुन्छ। SSL प्रमाणपत्रले त्यो जडानलाई ईन्क्रिप्टेड र सुरक्षित बनाउँदछ। वेबसाइटमा लिइएका कुनै पनि कार्यहरू - फारमहरूमा डाटा पठाउँदै, खरीदहरू गर्दा तेस्रो पक्षलाई चुहावट हुँदैन र वेबमा अन्य स्थानहरूमा पुनःनिर्देशित गरिने छैन।
SSL प्रमाणपत्र, वा यसको अभावले तपाईंको वेबसाइटको भ्रमण गर्ने व्यक्तिको संख्यामा महत्त्वपूर्ण असर पार्छ। हामीले अघि नै उल्लेख गरेझैं अनलाइन सुरक्षा झन् महत्त्वपूर्ण हुँदै गइरहेको छ। सबै महत्त्वपूर्ण जुन प्रयोगकर्ताहरूलाई सेवा पुर्‍याउँछ Google सर्च ईन्जिनले पनि यसको सराहना गर्छ। यसले हाम्रो वेबसाइटको स्थितिमा ठूलो प्रभाव पार्दछ। कार्यान्वयन गरिएको SSL प्रमाणपत्र बिना पृष्ठहरू यस सर्टिफिकेट भएको प्रतिस्पर्धी पृष्ठहरू भन्दा निम्न स्थानहरूमा हुनेछन्। साथै यो सिधा तपाइँको अनलाइन स्टोर वा तपाइँको व्यवसाय कार्ड पृष्ठ को दृश्य संख्या मा traduced हुनेछ।
अनलाइन खरीदहरूको अप्ट-आउट
एक SSL प्रमाणपत्र बिना तपाइँको वेबसाइट खोज परिणाम मा धेरै कम देखिने छ, तर प्रयोगकर्ताहरु अझै पनी यो फेला पार्ने मौका हुनेछ। दुर्भाग्यवस, कार्यान्वयन गरिएको प्रमाणपत्र बिना, तपाइँको बाउन्स दर धेरै बढी हुनेछ। सबै सन्देशहरूमा धन्यवाद, तपाईंको आगंतुकहरू ब्राउजरबाट प्राप्त गर्दछन्, चाहे यो क्रोम वा फायरफक्स ब्राउजर हो। तपाईका ग्राहकहरुसँग एक चेतावनी हुनेछ कि उनीहरू हालसालै हेर्दै आएका साइट असुरक्षित र "खतरा" हो। यस प्रकारको जानकारीले तपाईंको सामानहरू वा सेवाहरूको सम्भावित खरीददारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा डराउँदछ, र तपाईंको कम्पनीमा भरोसाले ठूलो गिरावट ल्याउँछ।
साधारण दर्ता र लगईन
खाता सेट अप गर्ने पहिलो चरणमा, यसको आवश्यक पर्दछ, उदाहरणका लागि, केवल एक ई-मेल ठेगाना र पासवर्ड, र अन्य डाटा जब अर्डर राख्दा। लामो फारमले प्रयोगकर्तालाई खाता सिर्जना गर्न निरुत्साहित गर्नुपर्दैन, तर सबै भन्दा माथि यसलाई परिष्कृत गर्न सम्झनुहोस्। प्रत्येक फाँटको लागि नोटहरू थप्नुहोस् ताकि प्रयोगकर्ताहरू कुन जानकारी उनीहरूले प्रदान गर्नुपर्दछ र कुन फाराममा स्पष्ट छ।
लोकप्रिय कम लागत वाली एयरलाइन्सको वेबसाइट एक चेतावनी हुन सक्छ, जहाँ टेलिफोन नम्बर प्रविष्ट गर्ने फारममा जानकारी अस्पष्ट छ। असर? Google फोरममा दर्जनौं शीर्षकहरू जहाँ प्रयोगकर्ताहरू रजिष्ट्रेसन चरणमा कसरी जान्छन् सोध्छन्। यो गम्भीर गल्ती हो जसमा सम्भावित ग्राहकहरूको ठूलो रकमको नोक्सान भयो।
यो ध्यान देने योग्य छ कि अब यो दर्ता गर्न आवश्यक बिना प्रयोगकर्तालाई "अतिथि" को रूपमा खरीद गर्न अनुमति दिन लगभग मानक छ।
विशिष्ट उत्पाद विवरण
एकातिर, यो उत्पादन वर्णन लेख्न को लागी राम्रो छ SEO सिद्धान्तहरूलाई ध्यानमा राख्दै, त्यसोभए ती वर्णनहरू गुगल खोजी ईन्जिनहरूका जैविक परिणामहरूमा स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ, तर अर्कोतर्फ यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई खरीद गर्नका लागि मनाउनु पर्छ। उत्पादन र जानकारीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदाहरूमा ध्यान दिनुहोस् जुन उनीहरूलाई रुचि छ। के तपाईं वर्गीकरण मा दिईएको आइटम सम्बन्धित कुनै प्रश्नहरू प्राप्त? यस जानकारीको साथ विवरण पूरा गर्नुहोस्।
माथिका कार्यहरू केवल चयन गरिएका समाधानहरू हुन् जसले अनलाइन स्टोरमा रूपान्तरण बढाउन मद्दत गर्दछ। तपाइँको साइट मा निर्भर गर्दै, अन्य काम प्रभावी हुन सक्छ। यो स्टोरको निरन्तर विकासको लागि, परिवर्तनहरू प्रस्तुत गर्न र यसको फाइदाको विश्लेषण गर्न लायक छ।